Taariikhda Caasimada Somalia 2020
Muqdisho (Dhagaxtuur) - Taariikhda kooban ee caasimada Soomaaliya.
Waa xagee bilicda caasimada?
Sidee ku taageeri kartaa horumarka dalkaaga?
Asalka magaca Muqdisho ayaa aragtiyo badan oo ay ka mid yihiin ka Soomaali erayga Muuq Disho taasoo la micno ah hortiisa-dilaaga ama reer Faaris erayga Maq'ad-i-Shah مقعد شاه ), oo macnaheedu yahay "kursiga Shah".
Waxaa loo yaqaanaa Xamar (Af-Ingiriis: Hamar ). Fikrad kale ayaa ah in laga soo qaatay xididka carabiga ee 'mqds', oo macnaheedu yahay "meelay ku yaalliin (meel)". . Sahamin qarnigii 16-aad Leo Africanus wuxuu magaalada u yaqaanay Magadazo (alt). Magadoxo ).
Muqdisho qayb ka mid ah uu ahaaSoomaali magaalo-goboleedyadain ku hawlan shabakad ganacsi faa'iido badan xira Soomaali baayacmushtariyaasha la Foynike,Ptolemic Masar,Greece,Parthian Faaris,Saba,Nabataea iyo Boqortooyada Roomaanka. Badmaaxiinta Soomaaliyeed ayaa adeegsaday markabkii hore ee badda Soomaaliya ee loo yaqaan 'sariirta'si ay xamuulkooda u qaadaan.
Horraantii qarnigii 13aad, Muqdisho iyo magaalooyin kale oo xeebeed iyo kuwa gudaha ah oo ku yaal koonfurta Soomaaliya iyo bariga Abyissina ayaa hoos yimid maamulka Ajuran Sultanate waxayna la kulmeen Da 'Da' kale.
Intii lagu gudajiray socdaalkiisii, Ibn Saciid al-Maghribi (1213–1286) wuxuu xusey in magaalada Muqdisho ay mar horeba noqotay xarunta ugu sareeya islaamka ee gobolka. Waqtigii safarka Moroccan ee Ibn Battuta muuqashadiisa xeebta Soomaaliya 1331, magaaladu waxay ku jirtay xudunta barwaaqada.
Waxa uu ku tilmaamay Muqdisho "magaalo aad iyo aad u ballaaran" la baayacmushtariyaasha badan oo hodan ah, taas oo ahayd caan ku tahay tayo sare leh dhar in dhoofiyo Masar, ka mid ah meelaha kale.
Wuxuu kaloo sharaxay soo dhoweynta dadka reer Muqdisho iyo sida ay dadka deegaanku u geliyaan safrayaasha guryahooda si ay uga caawiyaan dhaqaalaha maxalliga ah. Battuta wuxuu intaas ku daray in magaalada ay xukumayaan Suldaan Soomaaliyeed, Abu Bakr ibnu Sayx 'Umar, kaas oo asal ahaan ka soo jeeda magaalada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya wuxuuna ku hadlaa labada af-soomali (waxaa loo yaqaan Battuta oo ah Benaadir, oo ah koonfurta Soomaaliya ). iyo Carabi si isku mid ah u wada hadla.
Suldaanku wuxuu kaloo lahaan jiray waardiyayaal (wasiirro), khubaro xagga sharciga ah, taliyeyaal, saraakiishii boqortooyada, iyo mas'uuliyiin kale oo joogay gadhka. Ibn Khaldun (1332 ilaa 1406) wuxuu ku xusay buuggiisa in Muqdisho ay ahayd magaalo weyn . Wuxuu kaloo sheegtey in magaaladu ay aad ugu badneyd oo ay ku badnaayeen ganacsato hodan ah, hadana reer guuraaga dhaqan ahaan.
Vasco Da Gama, oo soo maray magaalada Muqdisho qarnigii 15aad, wuxuu xusay inay tahay magaalo weyn oo leh guryo leh afar ama shan dabaq oo dhaadheer oo kuyaal badhtamaha waaweyn iyo masaajiddo badan oo leh minaarado siman. Qarnigii 16aad, Duarte Barbosa wuxuu xusay in maraakiib fara badan oo ka socda Boqortooyada Cambaya ay u soo safreen Muqdisho iyagoo wata maro iyo udgoon ay iyagu kaga soo qaateen dahab, wax iyo fool maroodi . Barbosa waxay kaloo iftiimisay hilibka badan, qamadiga, shaciirka, fardo, iyo miraha suuqyada xeebaha, kuwaas oo ganacsatada u horseeday hanti aad u badan.
Muqdisho, oo ah xarunta warshadaha dhir udgoon ee loo yaqaan 'toob benadir' (oo ku takhasustay suuqyada Masar iyo Siiriya ), ay weheliso Merca iyo Barawa ayaa sidoo kale u adeegsan jiray sidii ay u joojin lahaayeen ganacsatada Sawaaxiliga ee Mombasa iyo Malindi iyo ganacsiga dahabiga ah ee ka yimaada. Kilwa . Ganacsato Yuhuud ah oo reer Hormuz ah ayaa iyaguna dharkoodii iyo khudradii Hindiya keenay xeebta Soomaaliya si ay uga beddelaan hadhuudh iyo alwaax.
Boqortooyadii Boortaqiiska ayaa ku guuleysan weyday inay qabsato magaalada Muqdisho halkaas oo uu ku sugnaa taliyihii ciidamada Burtuqiiska ee xoogga badnaa oo la yiraahdo João de Sepúvelda iyo ciidamadii uu watay ay si weyn ugaga adkaadeen ciidamada badda Ajuran intii lagu jiray Dagaalkii Benaadir .
Marka loo eego sahamin qarnigii 16-aad, Leo Africanus waxay muujineysaa in dadka asaliga ah ee ku nool Muqdisho caasumada Ajuran Sultanate inay yihiin kuwo asal ahaan ka soo jeeda asalka dadka waqooyiga ee Seila caasimada Adal Sultanate . Waxay guud ahaan ahaayeen dherer leh maqaarka saytuunka ah, qaarna mugdi noqdeen. Waxay xidhnaayeen silsilad cad oo qani ah oo duub ah oo jidhkooda ku xidhnayd oo waxay leeyihiin marawalo Islaami ah oo dadka xeebaha ku noolina waxay xidhaan uun sarsarro, waxayna Carabi ugu hadli jireen sidii lingua franca.
Hubkooda wuxuu ka koobnaa hubka caadiga ah ee soomalida sida seefta, daggayaasha, warmaha, faashashka dagaalka, iyo qaansooyinka, in kasta oo ay gacan ka heleen gacan-ku-haynta Boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo soo dejinta hub sida muruqyada iyo qumbaha . Intooda badan waxay ahaayeen muslimiin, in kasta oo qaar ka mid ah ay u hoggaansameen dhaqankii beddelka quruxda badnaa; waxaa sidoo kale jiray tiro ka mid ah Masiixiyiinta Abisiniyanka ah oo gudaha kusugan.
Magaalada Muqdisholafteedu waxay ahayd maalqabeen xoog leh, xoogna leh oo si wanaagsan loo dhisay-dawlad-goboleed, kaas oo ilaaliya ganacsiga ganacsiga boqortooyooyinka adduunka oo dhan. Magaalada weyn waxaa ku hareereysan qalcado dhagaxyo ah.
Sawirada Caasimada Soomaaliya Muqdisho 2020
Muuqaalka Maanta Caasimada 2020